Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: ﻿﻿ILAYS TV oo u Awood sheegtay TV,yada Guumaystaha Itoobiya.
Maqaal: ﻿﻿ILAYS TV oo u Awood sheegtay TV,yada Guumaystaha Itoobiya.
Waxaynu joognaa Duni casri ah markii laga eego dhanka Tignolojiga oo aad loo hurumariyay. Waxaa si aad ah horukac u sameeyey Sabankan aaladda Birta markaad eegto qeybaheeda kala duwan. Birta qaarkeed way ku xambaareysaa oo hawada ayay kula galeysaa sida Diyaaradaha. Qaarkeedna Baday kudul marinaysaa sida Maraakiibta, Qaarkeedna Barriga ayay xawaare kugu jiidhsiineysaa sida Baabuurta, Qaarkeedna waxbay duubaysaa sida Kaamerada, Qaarkeedna waxbay dilaysaa sida hubka, Qaarkeedna waxbay ku maqashiinaysaa sida Taleefanada, Qaarkeedna waxbay ku tusaysaa sida Telefeshinada, Qaarkeedna waqtiga ayay kuu sheegaysaa sidaa Saacadaha.
Hadaan hordhaca intaa kaga gudbo soomaalidu waxay ku maah,maahdaa Geel 2 jir soo wada mar oo micnaheedu yahay Geelu wuu dheerar badan yahay, hase ahaatee waxuu soo maray waqti uu gaabnaa ama tabar yaraan jiray wuuse kasoo gudbay. ILAYS TV ayaa soo maray marxalado kala duwan waxaana ka mid ahaa inuu muddo gaaban Asbuucii ku lahaa mid kamid ah TV,yada Somalida balse itoobiya oo aad ugu nugul in wax laga sheego ayaa culays saartay Milkiilayaashii TV,ga sidii buuna ku istaagay heshiiskii lala galay.
Waxaa muuqata in masuuliyiinta Wakaaladda Wararka ee loo yaqaano ONA gaar ahaan qaybtooda aqoonta sare uleh sargoynta iyo qaabeynta aalada la iska arko inay dadaal badan galiyeen sidii loo sii xoojin lahaa ILAYS TV. Waxaan farta ku fiiqayaa in wariyayaasha daadihiya ILAYS TV inay soo qaateen koorsooyin heer sare ah xaga adeegsiga Computerka kahor intayna sii guda galin hawshooda. Ujeedada ugu muhiimsan ayaa ahayd, in si muuqaal ah loo gaadhsiiyo guud ahaan bulshada ree ogadenya geedi socodka halganka gude iyo dibadba waana lagu guulaystay.
Daawashada TV,yada guumaystaha itoobiya ayaa noqday karaahiyo Magoogan, kadib markii warkoodii isugu biyo shubtay been la dhoodhoobay. Waxaa xataa u adkaysan waayay wariyaashoodii oo goor walba lagu qasbayo inay been soo alifaan, taasoo wadnaha ka qabatay ilaa qaarkood baxsadaan qaarna xabsiyada loo taxaabo. Sideedaba beentu lug la qabto ayay leedahay mana tabar badna. Wax kasta oo TV,da guumaystuhu soo maluuqaana waxaa kashifaya ILAYS TV oo warar iyo muuqaalo xaqiiqda ku dhisan soo bandhiga, Taasoo ka dhigan in TV,dii Guumaystaha loo awood sheegtay.
Guud ahaan barnaamijyada kabaxa ILAYS TV waxaan ku qiimayn karaa kuwo aad usoo jiitay dareenka dadwaynaha gaar ahaan Sanadahan dambe. Waxaa intaa sii dheer iyadoo la kordhiyay maal,maha uu hawada soo galo. Sikastaba ha ahaatee Guumaystaha itoobiya ayaa ka quustay inuu hawada kasaaro ILAYS TV oo culays wayn ku haya siyaasadiisa Macangaga ah.
Waxaan ku soo khatimayaa Qormadan in guumaystuhu marayo marxalad aad u liidata, saxaafad ahaan, Milatari ahaan, Siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba, Sidaa darteed waxaa lasoo gaadhay waqtigii ay hormuudka halganka iyo Taageerayaashiisa Mintidka ah oo isku duuban ku tuman lahaayeen cadowga Mooralka jabsan ee sii liicaya.